ဝတ်ပြုရေး၏အခြေခံမူများ - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2018-04 > ဝတ်ပြုကိုးကွယ်အခြေခံပညာအခြေခံမူ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းဖြင့်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေပြီးမှန်သောအဖြေကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေကြားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည်တန်ခိုးတော်အတွက်သာမကကြင်နာမှုကြောင့်လည်းချီးမွမ်းထိုက်သည်။ ဘုရားသခင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ပြီးသူလုပ်သမျှသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ချီးမွမ်းထိုက်၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူသားတို့၏မေတ္တာကိုပင်ချီးမွမ်းကြသည်။ အခြားသူများကိုကူညီရန်သူတို့၏ဘဝကိုမြှုပ်နှံသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ချီးမွမ်းသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ကိုကယ်တင်ရန်သင်၌ခွန်အားအလုံအလောက်မရှိသော်လည်းအခြားသူများကိုကူညီရန်သင်၎င်းကိုအသုံးပြုသည် - ချီးကျူးထိုက်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူများကိုကူညီနိုင်စွမ်းရှိသော်လည်းငြင်းဆိုရန်ငြင်းဆန်သောသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ဝေဖန်သည်။ ကြင်နာမှုသည်တန်ခိုးထက် ပို၍ ချီးမွမ်းထိုက်သည်။ ဘုရားသခင်၌သူနှင့်တန်ခိုးရှိသောကြောင့်နှစ် ဦး စလုံးရှိသည်။
ချီးမွမ်းခြင်းကဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့စပ်ကြားရှိချစ်ခြင်းနှောင်ကြိုးကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ထားရှိသောဘုရားသခင့်မေတ္တာတော်သည်ဘယ်သောအခါမျှစိတ်ပျက်စရာမဟုတ်ပါ၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၌ထားတော်မူသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုငါတို့အားပြတော်မူသောမေတ္တာတော်ကိုငါတို့သည်အမှီ ပြု၍၊ ဘုရားသခင်သည်မည်မျှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မှတ်မိပြီးထပ်ခါတလဲလဲမှတ်မိခြင်းသည်ကောင်း၏၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ခရစ်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွန်အားပေးပြီးသူ၏ကောင်းမြတ်ခြင်း၌လည်းသူနှင့်တူလိုသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒကိုတိုးပွားစေသည်၊ ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတိုးပွားစေသည်။
Wir sind dazu geschaffen, Gottes Wohltaten zu verkünden (1. ဓာတ်ဆီ 2,9), ihn zu rühmen und zu ehren – und je besser wir mit Gottes Ziel für unser Leben übereinstimmen, desto grösser wird unsere Freude sein. Das Leben ist erfüllter, wenn wir tun, wozu wir geschaffen sind: Gott zu ehren. Wir tun dies nicht nur in unseren Gottesdiensten, sondern auch durch unsere Lebensweise.
ငါတို့ဘုန်းအသရေတော်ကိုကြားပြောစေခြင်းငှါငါတို့ကိုခန့်ထားတော်မူပြီ။ ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်၊ ငါတို့အားထာဝရကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးနှင့်ကယ်တင်ခြင်းအဘို့အလိုငှါငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုထောမနာသီချင်းဆိုခြင်းငှါ၎င်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သစ္စာစောင့်သိမှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသူ့အားကြွေးတင်နေသည်။
ဆာလံ 33,13 fordert uns auf: «Freuet euch des Herrn, ihr Gerechten; die Frommen sollen ihn recht preisen. Danket dem Herrn mit Harfen; lobsinget ihm zum Psalter von zehn Saiten! Singet ihm ein neues Lied; spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall!» Die Schrift weist uns an, zu singen und vor Freude zu jubeln, Harfen, Flöten, Tamburine, Posaunen und Zimbeln zu benutzen – ja ihn sogar tanzend anzubeten (Psalm 149-150). Das Bild ist eines von Überschwang, von unbändiger Freude und von Glück, das ohne Zurückhaltung ausgedrückt wird.
သမ္မာကျမ်းစာကအလိုအလျောက်ကိုးကွယ်ခြင်း၏ဥပမာများကိုပြသည်။ ၎င်းတွင်ရာစုနှစ်များစွာကတည်းကလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့သောပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်အတူအလွန် ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်မှုပုံစံများလည်းပါ ၀ င်သည်။ ကိုးကွယ်မှုပုံစံနှစ်မျိုးစလုံးသည်တရားမျှတနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်ကိုဂုဏ်တင်ရန်တစ်ခုတည်းသောမှန်ကန်သောလူဖြစ်သည်ဟုမည်သူမျှမဆိုနိုင်ပါ။ ဝတ်ပြုရေးတွင်အရေးကြီးသောအခြေခံမူအချို့ကိုယခုဖော်ပြပါရစေ။
Gott möchte, dass wir ihn anbeten. Dies ist eine Konstante, die wir vom Anfang bis zum Ende der Bibel nachlesen können (1. ကြွက် 4,4; ယော 4,23; ဗျာဒိတ် ၂2,9). Die Anbetung Gottes ist einer der Gründe, warum wir berufen sind: seinen Ruhm [seine Wohltaten] zu verkünden (1. ဓာတ်ဆီ 2,9). Gottes Volk liebt und gehorcht ihm nicht nur, sondern führt auch Handlungen der Anbetung aus. Es opfert, es singt Lobpreislieder, es betet.
ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်၌ ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ရမည်ကိုဖော်ပြထားသည်။ ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသည်လူတစ်စုအတွက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်နေရာတစ်ခုသို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်နေရာတစ်ခုကိုကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ခရစ်တော်သည်မောရှေ၏တောင်းဆိုချက်များကိုပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ ယုံကြည်သူအားလုံးသည်ယဇ်ပုရောဟိတ်များဖြစ်ကြပြီး၊
၀ တ်ပြုကိုးကွယ်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်းသမ္မာကျမ်းစာတစ်လျှောက်လုံးတွင်ရိုးရှင်းသောစဉ်ဆက်မပြတ်တွေ့ရသည်။ ဘုရားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ခွင့်ပြုသည်။ ဝတ်ပြုရေးကိုသီးသန့်သီးသန့်ထားမှသာလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံးကိုတောင်းဆိုသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သစ္စာလည်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ဘုရားနှစ်ပါးအစေကိုမခံနိုင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏စည်းလုံးမှုသည်သူကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ရှေးIsraelသရေလနိုင်ငံတွင်ခါနာန်လူမျိုးဘုရားဗာလသည်ဘုရားသခင်နှင့်ပြိုင်ဆိုင်ရလေ့ရှိသည်။ ယေရှုခေတ်တွင်ဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာများ၊ မိမိကိုယ်ကိုဖြောင့်မတ်စွာကျင့်ခြင်းနှင့်အရေခြုံမှုတို့ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြားရှိအရာအားလုံး - သူ့အားနာခံခြင်းမှတားဆီးသောအရာမှန်သမျှသည်မှားယွင်းသောဘုရား၊ တချို့အတွက်ငွေပဲ။ အခြားသူတွေအတွက်ကတော့လိင်ပဲ။ အချို့သူများသည်အခြားသူများနှင့်သူတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ပတ်သက်၍ ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားသောပြproblemနာကြီးရှိသည်။ တမန်တော်ယောဟန်ကသူ၏မှားယွင်းသောနတ်ဘုရားအချို့ကိုသူ၏စာတစ်စောင်တွင်ဖော်ပြထားသည် -
Liebt nicht die Welt! Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört! Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz – all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht; doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. (1. ဂျိုဟန် 2,15-17 NGÜ)။
ငါတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး။ ငါတို့ကသူတို့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသတ်၊ သတ်ပစ်ရမယ်၊ မှောက်မှားသောဘုရားများကိုဖယ်ရှားရမယ်။ ဘုရားသခင့်စကားနားမထောင်အောင်တစုံတခုကတားဆီးမယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုဖယ်ရှားပစ်ရမယ်။ ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုသာကိုးကွယ်တဲ့သူ၊ သူ့ဘ ၀ ရဲ့ဗဟိုအရာမှာသူရှိနေစေချင်တယ်။
သမ္မာကျမ်းစာကပြသသောကိုးကွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောတတိယအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ကိုးကွယ်မှုသည်စိတ်ရင်းမှန်ရမည်။ ၎င်းသည်ပုံသဏ္theာန်အတွက်၊ မှန်ကန်သောသီချင်းများသီဆိုခြင်း၊ အချိန်ကာလ၌စုရုံးခြင်း၊ မှန်ကန်တဲ့စကားလုံးများပြောဆိုခြင်းအတွက်သာမကဘုရားသခင်အားစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့မချစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကိုသူတို့၏နှုတ်ခမ်းဖြင့်ဂုဏ်တင်သူများအားယေရှုပြစ်တင်ဝေဖန်သော်လည်းသူတို့၏စိတ်နှလုံးသည်ဘုရားသခင်နှင့်ဝေးကွာသောကြောင့်သူတို့၏ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုများသည်အချည်းနှီးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကိုးကွယ်မှုကိုဖော်ပြရန်သူတို့၏မူလဓလေ့ထုံးတမ်းများသည်စစ်မှန်သောအချစ်နှင့် ၀ တ်ပြုရေးအတွက်အတားအဆီးများဖြစ်သည်။
Überall in der Bibel ist deutlich, dass wahre Anbetung und Gehorsam zusammengehören. Dies betrifft insbesondere Gottes Wort in Bezug auf die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Wir können Gott nicht ehren, wenn wir seine Kinder geringschätzten. «Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht» (1. ဂျိုဟန် 4,20-21). Eine ähnliche Situation beschreibt Jesaja mit beissender Kritik über Leute, die Anbetungsrituale befolgen und gleichzeitig soziale Ungerechtigkeit praktizieren:
Bringt nicht mehr dar so vergebliche Speisopfer! Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel! Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlung mag ich nicht! Meine Seele ist Feind euren Neumonden und Jahresfesten; sie sind mir eine Last, ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch; und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht (Jesaja 1,11-15) ။
ငါတို့ပြောနိုင်သလောက်၊ လူတွေထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေ့တွေ၊ နံ့သာမျိုးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပူဇော်ထားတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေလက်ထက်မှာဘာအမှားမှမရှိဘူး။ ပြသနာကသူတို့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ကျန်တဲ့အချိန်ဘဲ။ "မင်းရဲ့လက်တွေမှာသွေးတွေပြည့်နေတယ်" သူကပြောတယ် (အပိုဒ် ၁၅) - ပြဿနာကတကယ့်လူသတ်သမားတွေချည်းဘဲ။
သူကပြည့်စုံသောအဖြေကိုတောင်းဆိုခဲ့သည် -“ အဆိုးကိုလွှတ်ပါ။ ကောင်းတာလုပ်ဖို့သင်ယူပါ၊ တရားမျှတမှုကိုရအောင်ကြိုးစားပါ၊ အဖိနှိပ်ခံတွေကိုကူညီပါ၊ မိဘမဲ့တွေအတွက်တရားမျှတမှုကိုဖန်တီးပါ၊ မုဆိုးမတွေရဲ့အမှုကို ဦး ဆောင်ပါ။ ” (အခန်းငယ် ၁၆-၁၇) ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့လူအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကိုစနစ်တကျထားရမယ်။ သူတို့ဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေ၊ လူမှုရေးအဆင့်အတန်းအယူအဆတွေနဲ့မတရားတဲ့စီးပွားရေးအလေ့အကျင့်တွေကိုဖျောက်ပစ်ရမယ်။
တစ်ပတ်ကိုခုနစ်ရက်လျှင်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ဆက်ဆံပုံတွင်ဝတ်ပြုရေးကိုထင်ဟပ်သင့်သည်။ ဒီမူကိုသမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးမှာတွေ့နိုင်တယ်။ ငါတို့ဘယ်လိုဝတ်ပြုသင့်သလဲ ပရောဖက်မိက္ခာကဤမေးခွန်းကိုမေးပြီးအဖြေကိုရေးသည်။
Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr Gefallen haben an viel tausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott (Micha 6,6-8) ။
၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသည်ပြင်ပလုပ်ဆောင်မှုထက်မကပါ။ ၎င်းတွင်အမူအကျင့်ပြောင်းလဲခြင်းပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လုပ်ဆောင်သောနှလုံးပြောင်းလဲခြင်းမှလာသည်။ ဆုတောင်းခြင်း၊ လေ့လာခြင်းနှင့်အခြား ၀ ိညာဉ်ရေးရာစည်းကမ်းချက်များ၌ဘုရားသခင်နှင့်အချိန်ဖြုန်းလိုစိတ်ရှိခြင်းသည်ဤပြောင်းလဲမှုအတွက်အရေးကြီးသည်။ ဤအခြေခံကျသောအပြောင်းအလဲသည်မှော်အရမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပေါလုသည်ကိုးကွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်ကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်
Da wir alle Priester sind, haben wir die priesterliche Pflicht, die Wohltaten und den Ruhm dessen zu verkündigen, der uns berufen hat (1. ဓာတ်ဆီ 2,9) – ein Dienst der Anbetung, den jeder Gläubige tun oder an dem er sich beteiligen kann, indem er anderen hilft, das Evangelium zu verkündigen. Als Paulus den Philippern für die Überbringung der finanziellen Unterstützung dankte, benutzte er Begriffe der Anbetung: «Ich habe durch Epaphroditus empfangen, was von euch gekommen ist: ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig» (Philipper 4,18).
Finanzielle Hilfe zur Unterstützung anderer Christen kann eine Form der Anbetung sein. Anbetung wird im Hebräerbrief als etwas beschrieben, das sich in Worten und Taten manifestiert: «So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit andern zu teilen vergesst nicht; denn solche Opfer gefallen Gott» (Hebräer 13,15-6) ။
ဘုရားသခင်ကသူ့အား ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ရန်၊
၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့လုပ်သမျှအားလုံးပါ ၀ င်သည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှမီးခိုးများနှင့်ပြာများ မှလွဲ၍ ကျန်မီးသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းများကိုလုံးဝမီးမွှေးပေးခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့သားကောင်မဆိုဤနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သလား